Ihe omimi: ihe omume enyi na SEO nke ga - eme ka Google Panda hụrụ gị n'anya!
Ọ bụrụ na ị mepee ikpo okwu n'oge na-adịbeghị anya ma chọọ ịmepụta ihe, rịba ama na ọdịnaya dị elu na nke enweghị nsogbu nwere ike ime ka ị nwekwuo ike na ịntanetị. Ị ga - emepụta nza nke okporo ụzọ site na mgbasa ozi mmadụ na Google ma ọ bụrụ na ọdịnaya gị dị na akara ahụ.
Jack Miller, Semalt Onye Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ndị Na - ahụ Maka Ọrụ, kweere na àgwà ọdịnaya bụ ebe kachasị mkpa iji lekwasị anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzere mkpesa na mbibi Google Panda. N'ihi na Panda bụ ihe dị mkpa nke nchịkọta akụkọ Google nke algorithm na 2017.
Lekwasị anya na Onye ọrụ:
Okwesiri ilekwasị anya na ndị ọrụ ma a bịa n'ahịa na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ihe bụ isi bụ na ndị mmadụ na-agbalị ịdepụta ma kwalite ọdịnaya dị ala, ma ị kwesịrị ilekwasị anya na ịdepụta ihe ndị dị elu na ihe dị iche iche. N'ebe a, ndị webmasters niile na ndị na-ede blọgụ kwesịrị ịghọta ihe ụfọdụ dị mkpa banyere otu esi emeju ọdịnaya chọrọ ịntanetị, n'ihi na ọnụ ụzọ nke ịga nke ọma nwere ike imeghe naanị mgbe ha na-emebighị àgwà nke ọdịnaya.
Idepụta ọdịnaya enyi na SEO aghọwo ihe dị mkpa ụbọchị ndị a, ma ederede ibe weebụ gị kwesịrị kachasị site na iji okwu okwu na ahịrịokwu kwesịrị ekwesị
Ego Ole Ka Anyị Kwesịrị Ịde?
I kwesiri idebe ederede di mkpa na ibe maka uzo di nma n'usoro search engine nsonaazụ Ọ dị mma ịsị na enweghi ederede zuru oke site na isiokwu, ọ dị iche na isiokwu ruo isiokwu. M na-achọ ịkọ ụdị ọdịnaya ị na-ede, na isiokwu gị ga-ekpuchi ga-ekpebi ole edere ederede. A ga-edebe ụfọdụ n'ime isiokwu 300-400, ebe ndị ọzọ chọrọ ka ị dee ruo okwu 2000-3000. SERP ga-ekpebi ma ole ederede ka achọrọ maka nke kachasị mma na nsonaazụ ọchụchọ.Ma kama ilekwasị anya n'ikike nke ederede Mbụ (MC), ị ga-elekwasị anya na àgwà nke ọdịnaya na ụdị isiokwu ndị na-ege gị ntị masịrị ya. ede ole na ole edere ederede. Ụfọdụ peeji nke ga - enwe ọkwá dị elu karịa 50 okwu, ebe ndị ọzọ ga - enwe mmasị na Google ruo okwu 5000 .
John Mueller si na Google na-ekwu na ọ dịghị okwu ọbụla dị mkpirikpi na ndị na-ederede ọdịnaya kwesịrị ịdị na mma karịa ọtụtụ.
Ego ole ka anyị nwere ike ibuli?
Ọ dabere na ihe ole na ole, dịka ọmụmaatụ, ị kwesịrị ịṅa ntị na Isi Okwu nke ibe gị. Jide n'aka na enweghi udi na mado, na ọdịnaya di na Google. Na ọnọdụ a, ọ ga-adịrị gị mfe ikpochapụ ọdịnaya ahụ.
Zere Okwu Nri:
Nri nri bu megide Google na ntuziaka ntughari nyocha ndi ozo! Kama ị na-eri ọtụtụ mkpụrụokwu na nkebi ahịrịokwu, ị kwesịrị itinye nlezianya dị ukwuu iji nye ezi ọdịnaya. Ihe nri nri bụ usoro nke ikwughachi otu okwu ahụ ma ọ bụ ahịrịokwu ahụ na ọdịnaya gị. A na-ewere ya dị ka nwa ojii SEO usoro na-emegide iwu na ụkpụrụ Google.
Ihe mbụ ịmara "njirimara ọrụ" ị kwesịrị ị na-ejikwa ya bụ ọdịnaya dị elu na iji ntakịrị ihe eji eme ihe. I kwesiri ịkọwa ọdịnaya gị gaa na nchịkọta nke saịtị gị, jide n'aka na enweghi ike imeri àgwà ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe nwere ike inyere gị aka ibi ndụ na nsonaazụ Google Source .